YEYINTNGE(CANADA): Saturday, March 24
နိုင်ငံခြားသားပိုင် ကုမ္ပဏီ၏ အနိုင်ကျင့်မှုကို စက်ရုံ အလုပ်သမားများ တိုင်ကြားရန် ပြင်ဆင်
by Yangon Chronicle on Saturday, March 24, 2012 at 7:26am ·
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊မြောင်းတကာ စက်မှုဇုန်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသည့် တရုတ်လူမျိုးပိုင်
ရန်ကုန်သရဖူ သံမဏိစက်ရုံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် အလုပ်သမားများက စုပေါင်း၍ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်၏
အနိုင်ကျင့်မှုကို စုပေါင်းတိုင်ကြားရန် ပြင်ဆင်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အလုပ်ရှင်နှင့်အလုပ်သမားများကြား သဘောတူညီထားသည့် စာချုပ်ပါအချက်အလက်များကို အလုပ်ရှင်ဘက်မှ ဖောက်ဖျက်ရုံသာမက၊ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီအား ကြိုတင်မဲပေးရန် အတင်းအကျပ် ဖိအားပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့က ပြဿနာတစ်ရပ်ကို အကြီးအကျယ် မဖြစ်စေချင်တော့ ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တွေကို
ဝင်ညှိခိုင်းတာ၊ ညှိတုန်းခဏပဲ၊ ပြီးရင် အချိန်ပိုကြေး မပေးတာတွေ၊ လစာကို လဝက်ရောက်မှ ပေးတာတွေ ပြန်ဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ကစပြီး၊သတင်းမီဒီယာရဲ့အားကို အသုံပြုမယ် ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တာ”ဟု ယင်းစက်ရုံမှ သံရည်ကြို
ဌာနတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ စက်ရုံပိုင်ရှင်မှ အလုပ်သမားများ အပေါ် အနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ဒေသဆိုင်ရာ
အာဏာပိုင်များထံ တိုင်ကြားရာ၌ ထိရောက်သည့် တုံပြန်မှု မရရှိသည့်အပြင်၊ယင်းတိုင်ကြားမှုကို ဦးစီးဦးဆောင်
တိုင်ကြားသူများကို ပြစ်ချက်တစ်စုံ၊တစ်ရာ ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ အလုပ်မှ ထုတ်ပစ်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ခြင်းများ
“ကျွန်တော်တို့က ဒီလို အခြေအနေမှ မဖြစ်ရင် ဒေသန္တရ သမဂ္ဂတစ်ခုဖွဲ့ပြီး စက်ရုံပိုင်ရှင်ကို ရင်ဆိုင်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ရအောင် တောင်းဆိုမယ်”ဟု ယင်းစက်ရုံပိုင်ရှင်အား ရင်ဆိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူ အလုပ်သမားတစ်ဦးက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စရပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရန်ကုန်သရဖူ သံမဏိစက်ရုံသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် စည်းကမ်း
ဖောက်ဖျက်သည့် အလုပ်သမားများကို သတ်မှတ်ထားသည့် စည်းကမ်းများအရ အရေးယူရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် အလုပ်သမား အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းတောင်းဆိုမှုများ၏ ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များနှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၏ညှိနှိုင်းပေးမှုကြောင့် အောင်မြင်ခဲ့သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/24/20120အကြံပြုခြင်း
ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား နွားထိုးကြီးကော်မရှင် ခေါ်ယူသတိပေး
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်အတွင်း ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမှ ဥပဒေနှင့်မညီသည့် လုပ်ဆောင်နေမှုများကို အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ တိုင်ကြားခဲ့သည့်အတွက် နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲက ၎င်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအား ခေါ်ယူ သတိပေး လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့ကြောင့် သိရသည်။
“နွားထိုးကြီးမြို့နယ်မှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဥပဒေကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ သာသနာ့အဆောက်အအုံတွေဖြစ်တဲ့ ဇရပ်တွေ၊ ဓမ္မာရုံတွေက ခန်းမ ဆောင်တွေကို ဌားရမ်းသုံးပြုမှုတွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းကြည်နှင့် NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ထောင်ထွက် တွေ၊ သူခိုးတွေဆိုပြီး ဥပဒေနဲ့မညီညွှတ်ဘဲ ပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် နွားထိုးကြီးကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲကို တိုင်လိုက်ရတာပါ”ပာု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ထိုသို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ ဥပဒေနှင့် မညီညွှတ်သည့် လုပ်ဆောင်နေမှုများနှင့် အသေရေဖျက် စွပ်စွဲမှုများကို NLD ပါတီမှ တိုင်ကြားခဲ့သည့်အတွက် နွားထိုးကြီးမြို့နယ်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲမှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်အောင်ညွှန့်နှင့် အဖွဲ့ဝင် ဦးအောင်ဇော်မြင့် တို့အား ခေါ်ယူ၍ ဥပဒေနှင့် ပောာပြောမှုများကို လုပ် ဆောင်ရန် ခေါ်ယူသတိပေးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
“ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စည်းရုံးမဲဆွယ်တာတွေကို လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကော်မရှင်က ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေတွကို ဆန့်ကျင်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက် ခုလို ခေါ်ယူသတိပေးရတာပါ။ အခုလာမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို တရားမျှမျှတတနဲ့လုပ်ဖို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က သတိပေးထားပါ တယ်”ပာု နွားထိုးကြီးကော်မရှင်ရုံးခွဲမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရန် ၁၅၇ ယောက် အနက်မှ (၁၄ ) ဦးကို ပဏာမ ရွေးချယ်
ယနေ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် မတ်လ ၂၄ရက်နေ့ ညနေ ၆နာရီ တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်း ၌ ၁၀/၂၀၁၂ အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့ပါသည် ။ အစည်းအဝေး တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ၀င်များ တက်ရောက်ကြပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရန် လျှောက်ထားသည့် သရုပ်ဆောင်များ ရွေးချယ်ရန် ကိစ္စ နှင့် အခြား ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးခဲ့သည် ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရန် လျှောက်ထားသူ ၁၅၇ ယောက် အနက်မှ အောက်ဖော်ပြပါ သရုပ်ဆောင် (၁၄ ) ဦးကို ပဏာမ ရွေးချယ်လိုက်ပါသည် ။
အမည် စာရင်းပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ အားလုံး ကို လူတွေ့ စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသဖြင့်
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက် နံနက် ၉နာရီ တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင် ဖြစ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ ရုံးခန်းသို့ မပျက်မကွက် လာရောက်ပါရန် အကြောင်းကြားအပ်ပါသည် ။
By Linn Yaung ကိုထွန်းဝေဆီက သတင်းကိုယူပါတယ်
By Hein Htet
by The Voice Weekly on Saturday, March 24, 2012 at 8:33am ·
အမျှော်အမြင်ရှိတဲံ လူကြီးတွေလုပ်ထားတာတွေကို ဝေဖန်ပြစ်တင်နေတ အင်မတန်မှားယွင်း တဲ့အလုပ်ဘဲ။ ရှေ့ တုန်းက ဘုရားပုထိုးကြီးတွေ တည်ထားတဲ့ လူတွေကြောင့်မို့ ပုဂံဆိုတာ မြန်မာ့ဂုဏ်ကို ဆောင်တာပေါ့၊ အဲံဒီတုန်းက ဒီလိုပဲ ငါတို့ ဒီလောက်ဆင်းရဲတဲ့ နိုင်ငံ ဘုရားစေတီတွေ ပဲတည်ရလားဆိုပြီး အပြစ်သွားပြောလို့ဘယ်ရမလဲ၊ သမိုင်းရဲ့  ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေ အဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့လို့ ဒီနေ့ ဗမာဟေ့ ဆိုတဲ့ ကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ ဗုဒဘာသာ အမွေအနှစ်တွေကို စောင့်ရှောက်နိုင်တာပေါ့။ အဲ့ဒီလိုဝေဖန်တဲ့သူတွေက တအားမိုက်ရိုင်းလွန်းအားကြီးတာပေါ့နော်။ မိုက်ရိုင်းတာ မခံနိုင်လို့ ရှင်းပြရတာပါ။
အခြေခံဖြစ်တဲ့ ဒေသအသီးသီးက လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီးရောက်လာတဲ့လူကစာမှ မတတ် ဆယ်တန်းမှ မအောင်ဘဲလွှတ်တော်ထဲမှာ လာထိုင်တော့ သူများထဆိုမတ်တပ်ထနေတယ်။ သူများထိုင်ဆို ထိုင်နေတယ်။ သူများခလုပ် နှိပ်ဆို နှိပ်တယ်။ သူမှ ဘာမှမသိတာ။ ဘာတွေပြောနေလဲ သူနားလည်တာမဟုတ်ဘူး။ ရမ်းလုပ်နေရတာ။
ဥပဒေက ကမောက်ကမ ဖြစ်နေရင် အစိုးရ ကိုပဲ ဝေဖန်နေမယ်။ အထဲမှာ ရှိတဲ့မီဒီယာတွေ အနေနဲ့ကလည်း အစိုးရကို ဝိုင်းပြီး သမနေရင် ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး လှေကြီးနစ်တဲ့ အခါကြရင် ဘယ်သူက အရင်ဆုံးနာမလဲ။ ပြည်သူက အရင်ဆုံးနာမယ်။ တလှေတည်းစီး တခရီးထဲသွား တဖွဖွနေရ တယ်ဆိုတာ အဲ့ဒါပဲ။ လှော်တဲ့ကောင်ကလည်း လှော်ရမယ်။ ထိုင်တဲ့ကောင်ကလည်း ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်။ အသက်ကြီးပြီ ဆိုရင် ငြိမ်နေရမယ်။ငြိမ်ငြိမ် မထိုင်ဘဲ အသားကုန် ဟိုလှုပ်ဒီလှုပ်ရင် ဒါကြောင့်လဲ ဘုန်ကြီးအရူးနဲ့ လှေလူးလို့ပြောတာ။
မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ထုတ် Hot News Journal ပါ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်နှင့် တွေ့ဆုံခြင်းမှ ကောက်နုတ်ချက်။
ယခုကဏ္ဍတွင် ကောက်နုတ်ဖော်ပြထားသော အကြောင်းအရာများသည် သက်ဆိုင်ရာ မီဒီယာ သို့မဟုတ် စာရေးသူများ၏ အာဘော်သာဖြစ်ပြီး The Voice Weekly အယ်ဒီတာအဖွဲ့ အနေနှင့် သဘောတူခြင်း၊ မတူခြင်းကို ကိုယ်စားမပြုဘဲ အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်စေ၊ သဘောတူခြင်း မတူခြင်းကို ထူးခြားသော အသွင်တစ်ခုဆောင်နေပါက စာဖတ် ပရိတ်သတ်များ သတိပြုစေလို၍ ပြန်လည်ကိုးကားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၀န်ချတောင်းပန်ရန် လယ်ဆည်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတောင်းဆို
by Yangon Press International on Saturday, March 24, 2012 at 3:16am ·
မတ် ၂၄၊ ၂၀၁၂ (YPI)
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦမြင့်လှိုင်အနေဖြင့် HOT NEWS ဂျာနယ်ပါ အင်တာဗျူးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ပုတ်ခတ်ပြောကြားခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး လူသိရှင်ကြားဝန်ချတောင်းပန်ရန်အတွက် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ယမန်နေ့က ကြေငြာချက်တစ်ဆောင်ထုတ်ပြန်ကာ လက်မှတ်ရေးထိုး တောင်းဆိုလိုက်သည်။
ထိုကြေငြာချက်တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့်တကွ လွှတ်တော်အားလုံးကို အသရေ ဖျက် ဂုဏ်သိက္ခာပျက်စီးအောင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ယောက်က ကိုယ်နှုတ်စောင့်စည်းခြင်မရှိဘဲ ပြောဆိုမှုများအား ပြင်ထန်စွာ ရှုံ့ချကြောင်းနှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားလုံးကို နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာနှင့် ရုပ်မြင်သံကြားတို့မှ တရားဝင် ၀န်ခံခြင်း၊ ၀န်ချတောင်းပန်ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်တောင်းဆိုကြောင်း ပါရှိသည်။
ထိုသို့ ပြုလုပ်ပေးခြင်းမရှိပါက ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ဖောက်ဖျက်ပြီးစော်ကားကျူးလွန်မှုကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ဟု အသိပေးကြေငြာကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြထားသည်။
မတ် ၂၃ ရက်ထုတ် HOT NEWS ဂျာနယ်ပါ အင်တာဗျူးတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်က လယ်မြေများသို့ရေသွင်းရာတွင် ကုန်ကျစရိတ်ကို တွက်ချက်ခြင်းမှာ ဦးနှောက်မရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသည် ပညာတတ်သူများမဟုတ်ဘဲ အခြားသူ၏ ခိုင်းစေမှုကို လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသူများဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်ပြီး မြေပုံမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက “ ဒါတိုက်ရိုက်ကြီးစွပ်စွဲတာပဲ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက ပြည်သူကတင်မြှောက်ထားတာဆိုတော့ အစိုးရအနေနဲ့ အလေးထားဖို့လိုအပ်တယ် ” ဟုပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက လွှတ်တော်အားယခုကဲ့သို့ ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းမှာ ယင်းဝန်ကြီးဌာနတင်ပြသည့် အသုံးစရိတ်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှ လျှော့ချခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက သုံးသပ်သည်။
၎င်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာအေးမောင်က “ နိုင်ငံဘဏ္ဍာဆိုတာ ဦးသိန်းစိန်ပိုက်ဆံလည်းမဟုတ်ဘူး။ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်လှိုိင်ပိုက်ဆံလည်းမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူ့ပိုက်ဆံပဲ။ ပြည်သူ့ပိုက်ဆံကို အစိုးရက ကမောက်ကမ မလုပ်အောင်ထိန်းဖို့ လွှတ်တော်တွေမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ် ”ဟုပြောသည်။ ။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/24/2012 1 အကြံပြုခြင်း
တရားမ၀င်မြန်မာအလုပ်သမားများကို နှစ် ၂၀ကျော်အတွင်း အဆိုးရွာဆုံးဖမ်းဆီး
by The Voice Weekly on Saturday, March 24, 2012 at 7:34am ·
မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး တံခါးပေါက်ဖြစ်သော ရွှေလီမြို့တွင် ယာယီနေထိုင်ခွင့် ကဒ်မရှိသော မြန်မာအလုပ်သမားများကို နှစ်၂၀ ကျော်အတွင်း အဆိုးရွာဆုံးဖမ်းဆီးမှုဖြစ်နေကြောင်း ယင်းမြို့တွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော မြန်မာလူမျိုးများနှင့် အလုပ်သမားတို့ကို ကူညီပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းများက ပြောကြားသည်။
မြန်မာအလုပ်သမားများ သောင်းချီရှိသော ရွှေလီမြို့တွင် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှ အထူးစီမံချက် တစ်ရပ်အနေဖြင့် စတင်ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ မတ်လ ၂၃ရက်နေ့ထိ ယာယီနေထိုင်ခွင့် ကဒ်မရှိသော မြန်မာအလုပ်သမားဖမ်းဆီးခံရမှုမှာ လူ ၁၂၀၀ကျော် ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်း ယင်းအလုပ်သမားများကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသော ဦးအောင်ကျော်ဇော က The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
ယင်းကဲ့သို့ မြန်မာအလုပ်သမားများကို စစ်ဆေးဖမ်းဆီးခြင်းမှာ မတ်လဆန်းပိုင်းတွင် ငွေလဲလှယ် ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော တရုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မြန်မာအမျိုးသားတစ်ဦးက လုယက် သတ်ဖြတ်မှုနှင့် ရဲအရာရှိ (ယူနီဖောင်းမ၀တ်ထားသော) တစ်ဦးကို မြန်မာအလုပ် သမား ၆ဦးက ရိုက်နှက်သေဆုံးသော အမှုအပြီးတွင် ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၉၂ ခုနှစ်ဝန်ကျင် နှင့် ၂၀၁၀ခုနှစ်တို့တွင် စီမံချက်များဖြင့် အဖမ်းများခဲ့သော်လည်း အလုပ်သမား ရာဂဏန်းထိသာ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ယခုတစ်ကြိမ်မှာ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း ရွှေလီမြို့တွင် နှစ်၃၀ခန့်နေထိုင်သော ဦးအောင်ကျော်ဇောက ဆိုသည်။
“ ဖမ်းသွားတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို ရွှေလီမြို့အထွက်(ကျားဖုန်းဘက်)က မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ် ပေးတဲ့ ဆေးရုံးမှာ ထားထားတယ်။အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကို ယွမ် ၁၀၀၀ (တစ်ယွင်= ၁၂၇ ကျပ် ၀န်ကျင်) နဲ့ရွေးရတယ် ။ မနေ့က (မတ် ၂၂)ကတော့ ယွမ်၅၀၀နဲ့ ရွေးခဲ့ရတယ်”ဟု ၄င်း၏ ကိုယ်တွေ့လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့မှုကို ပြောပြသည်။
ရွှေလီမြို့တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသော မြန်မာလူမျိုးများအတွက် တရားဝင်နေထိုင်ရန်အတွက် တရားဝင်ထုတ်ပေးနေသည့် စာအုပ်အမျိုးအစား သုံးမျိုးရှိပြီး အပြာရောင် စာအုပ် ၊ အနီရောင် စာအုပ်နှင့် အစိမ်းရောင် စာအုပ်တို့ဖြစ်သည်။
ဦးသန်းမြင့်ရေ....ဦးလေးကတော့ လက်ညောင်းနေအောင် ခြစ်ရတော့မယ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကျွန်းစုမြို့နယ် စခန်းသစ်ကျေးရွာ ဟောပြောပွဲ မှအပြန် ပန်းဇင်ကျေးရွာ အနီးတွင် ညနေ ၅ နာရီ ကတည်းက သောင်တင် လျက်ရှိကြောင်း ယင်းခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါသွားသူ သတင်းထောက်တစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရေယာဉ်အပြင် အခြားရေယာဉ်နှစ်စီးပါ ထိုသို့သောင်တင်လျက်ရှိပြီး ပုံမှန်သွားလာနေသော ရှပ်ပြေးရေယာဉ်များလည်း ထိုသို့ သောင်တင် လေ့ရှိကြောင်း ဒေသခံ ရေယာဉ် လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောဆိုသည်။
ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။အခု သောင်ကလွတ်သွားပါပြီ ။နောက်နာရီဝက်လောက် မြိတ်ကိုရောက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အဓိက ကတော့ အမြန်ရေယဉ်မငှားပေးတာကြောင့်ပဲ။ စက်လှေနဲ့သွားရတာ ဘယ်လောက်ကြီးကြီး ဘယ်ခရီးတွင်ပါ့မလဲ။ မြိတ်မှာ ပေါလိုက်တဲ့ အမြန်ရေယဉ်တွေ။ ဘာကြောင့်မငှားပေးသလဲ ဆိုတာကတော့ ဘယ်သူတွေရဲ့လက်ချက်လည်းဆိုတာ သိသာပါတယ်ဗျာ။
အဲဗျ ကျန်တဲ့လှေက သောင်လွတ်ပြီး အမေစု ပါတဲ့ လှေက မလွတ်သေးတာတဲ့ ဗျ။
သူတို့လှေက အမေစုတို့လှေဆီပြန်သွားနေရတာတဲ့။ လုပ်ကြပါဦးဗျာ။ ညကနက်လာပြီ။ စိတ်ကပူစရာ။ အမေစုက နေလည်းသိပ်မကောင်းလို့ နားနေရတယ်တဲ့။
The Voice Weekly update...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လိုက်ပါလာသောရေယာဉ်နှင့် အခြားရေယာဉ် နှစ်စီးမှာ ည၈နာရီအချိန်တွင်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းယင်းခရီးစဉ်ကို လိုက်ပါသတင်းလျက်ရှိသော သတင်းထောက်ကအတည်ပြုပြောကြားသည်။
ဒီကနေ့ တနင်္သာရီတိုင်း မြိတ်မြို့ကို ရွေးကောက်ပွဲစည်းရုံးရေး အဖြစ်သွားနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခရီးစဉ်မှာ အခက်အခဲတွေ ကြုံနေရပါတယ်။ မြိတ်ကျွန်းစုတွေဆီကို သွားဖို့ စီစဉ်ထားပေမဲ့ အမြန်ရေယာဉ် ငှားမရတဲ့အတွက် စီစဉ်ထားတဲ့ ခရီးစဉ်တွေကို ဒီကနေ့ မသွားနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ NLD က ပြောပါတယ်။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြိတ်မြို့ကိုရောက်နေတဲ့ နောက်ဆုံး အခြေအနေကိုတော့ မသင်းသီရိက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တနင်္လာရီတိုင်း မြိတ်မြို့နယ်တွေထဲက ကျွန်းစုတွေဆီ ခရီးသွားနေတာမို့ ဒီခရီးရဲ့အခြေအနေတွေ သိဖို့ တညနေလုံး တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်နေပေမဲ့ ဖုန်းခေါ်မရဖြစ်နေတာပါ။ ဒါပေမဲ့ အခု နောက်ဆုံးအသံမလွှင့်ခင် မိနစ်ပိုင်းအတွင်း တယ်လီဖုန်းရတဲ့အခါမှာတော့ အခု သူတို့သွားနေတဲ့ မြိတ်ခရီးစဉ်မှာ အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတာတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိရတာပါ။ အဓိကကတော့ ကျွန်းစုတွေဆီကို သွားဖို့ တစ်နာရီကို အနည်းဆုံး ၂၅ မိုင်လောက်မောင်းနိုင်တဲ့ အမြန်ရေယာဉ်ကို ငှားပေမဲ့ ငှားမရတာကြောင့် ရတဲ့ ယာဉ်နဲ့ သွားနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မိုလို့ ခရီးမပေါက်နိုင်ဘဲ စခန်းသစ်ဆိုတဲ့ ရွာတစ်ခုမှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လူထုကို စကားပြောတာ လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်တဲ့နေရာတွေကို ဆက်သွားဖို့ အဆင်မပြေတော့လို့ အခု မြိတ်မြို့ကို လှည့်ပြန်လာနေရတယ်လို့ ဒီခရီးစဉ်မှာ အတူလိုက်ပါသွားတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကိုယ်ရေးအရာရှိ ဦးခွန်သာမြင့်က ပြောပါတယ်။
“ကျနော်တို့ စီစဉ်ထားတာ မဖြစ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့က အစောကြီးကတည်းက တွက်ပါတယ်။ သွားရမယ့်ခရီးနဲ့ ပြန်ရမယ့်ခရီးနဲ့ ဟိုမှာ စကားပြောမယ့်အချိန်နဲ့။ အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ သွားလို့ရနိုင်မယ့်ရေယာဉ်ကို ရှာပါတယ်။ တွေ့ပါတယ်။ ငှားမယ့်သူကလည်း ငှားမယ်ပြောလိုက်၊ မငှားဘူးပြောလိုက်နဲ့ နောက်ဆုံးကျတော့ တေ့ပြီးတော့မှ ကျနော်တို့ကို ကပ်ဖြုတ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ရှိတာနဲ့ စခန်းတစ်ခုကို သွားပါတယ်၊ စခန်းသစ်ဆိုတာ။ ဒါတောင်မှ ကန်ပေါ် ဆိုတာ နောက်ထပ် မိုင် ၃၀ လောက်သွားရမယ့် လမ်းတစ်ခုကို ကျနော်တို့ ဖြတ်ပြီးတော့ ပြန်လှည့်လာတာပါ။ အခုထက်ထိ ကျနော်တို့ မြိတ်ကို ပြန်မရောက်သေးပါဘူး။”
ဒါ့အပြင် ရေယာဉ် သောင်တင်တာတွေလည်း ကြုံခဲ့ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အခု ည ၉ နာရီနီးပါးထိ မြိတ်မြို့ကို ပြန်မရောက်သေးပေမဲ့ နောက်တစ်နာရီနီးပါးအကြာ မြိတ်မြို့ထဲကို ပြန်ရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ ဦးခွန်သာမြင့်က ပြောပါတယ်။ အခု တနင်္သာရီတိုင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး သွားဖို့ စ စီစဉ်ကတည်းက မြိတ်မြို့မှာ အမြန်ရေယာဉ် ငှားမရတဲ့ ပြဿနာရှိနေတာပါ။ ရေယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေကို သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းတွေနဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ရှိနေတာကြောင့် NLD ပါတီကို ရေယာဉ်မငှားရဲကြတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း NLD ပါတီကပြောပါတယ်။
Vote NLD လက်သည်း
By Nandar Wing
မြန်မာသံရုံးတွေ တကယ်ဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်နေကြပလား….
နုိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေအပေါ် မြန်မာသံရုံးတွေက လူလုိုသဘောထား မဆက်ဆံခဲ့တာ စစ်အစိုးရခေတ် နှစ် ၂၀ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ သိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ရောက်ပြန်တော့ ပြည်ပရောက် မြန်မာတွေကုို ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ပါဆုိုပီး သံရုံးဝန်ထမ်းတွေ ညွှန်ကြားချက်ထုတ်သတဲ့။ အဲလုိုညွှန်ကြားတာ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာသာရှိတယ်။
ကုိုယ့်မြန်မာပြည်သူတွေကုို မြန်မာသံရုံးက ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ပါဆုိုပီး ညွှန်ကြားနေစရာလုိုပါသလား။ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ပါဆုိုပီးညွှန်ကြားနေရကထဲက အရင်တုံးက ဆက်ဆံရေးမပြေပြစ်နဲ့လို့ ညွှန်ကြားထားသလား။ ဒီလုိုအစိုးရမျိုးတွေရတာ ၀မ်းနည်းစရာကောင်းလုိုက်တာ။
Media Group ဆိုတာ ဘာကို ပြောတာပါလိမ့်
By Su Per , Taken in Myeik
Kyaw Minn Hann
ဆိပ်ငယ် တံတား နားနေဆောင် အတွင်း ခဏ နားနေစဉ်...ထိုမှ ဆက်ကာ မြိတ်မြို့ ....ကမ်မော်ရွာ...စခန်းသစ်ရွာ များသို့ အမြန်ရေယာဉ် ဖြင့် စံတော်ချိန် 12.03 ခန့်တွင် ဆက်လက်ထွက်ခွါမည် ..
— at ကမ်းနားလမ်း ..ဆိပ်ငယ်ရပ် မြိတ်မြို့.
နိုင်ငံခြားသားပိုင် ကုမ္ပဏီ၏ အနိုင်ကျင့်မှုကို စက်ရံ...
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ရန် ၁၅၇ ယောက် ...
တရားမ၀င်မြန်မာအလုပ်သမားများကို နှစ် ၂၀ကျော်အတွင်း ...